सायद, मरिन्छ अब ! मलेसियामा मरिरहेकाहरुको कथा । « News24 : Premium News Channel
सायद, मरिन्छ अब ! मलेसियामा मरिरहेकाहरुको कथा ।
कमाउ र रमाउ । यस्तै, सुन्दर सपनाका वण्डलमा वेरिएर काठमाडौ हानिएका हजारौं युवाहरु यही कतै सडक गल्लीहरुमा हराए । पुरिए अग्ला भवनका भुइतिर । उज्वल भविष्यको खोजी गर्दै यो सानो उपत्यकामा ओइरिएका युवायुवतीहरु थेग्नै नसक्ने भए पछि रोजगारीका लागि दुबई, कतार र मलेसिया लगायतका मुलुकहरुमा उछिट्टए ।
काठमाडौले दुईं छाक पनि भुडीलाई न्यानो दिन नसक्दा बाँकी भरोसा रह्यो पासपोर्टमा । केही थान हजारमा साटेका राहदानी पनि मेनपावर कम्पनीहरुको दराज र ड्रएरमा बुझाउनुको विकल्प छैन । छाती फुकाएर लाइन लाग्नु पर्छ । विडम्वना !
देशले रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा लाखौं नेपाली यूवाहरु बिदेशिन बाध्य छन् । खाडीलगायतका मुलुकमा काम गर्न जाने नेपाली ३० लाखभन्दा बढी छन्। जुन सयौको संख्यामा दैनिक बढिरहेका छन् । नेपालीहरुको सुन्दर गन्तव्यको रुपमा परिचित छ मलेसिया । पछिल्लो तथ्यांकमा मलेसियामा मात्रै हाल नौ लाख नेपाली कामदार रहेका छन्। तिनीहरु कुनै न कुनै रुपमा शोषण र अन्यायमा पनि परिरहेका छन् ।
यस्तै पिडामा छन् यतिवेला उमेश वस्ती । गोरखा मसेल घर भएका उनी आज भन्दा २ बर्ष पहिले पुगेका थिए मलेसियाको पेनाङ शहर । सिलिटेक टेक्नोलोजीको अप्रेसन प्रा.लिमा कार्यरत वस्तीले मलेसियामा पाएको हण्डरको सूची लामो छ । मलेसियाको स्थानिय लुटेराहरुको निशानामा पर्नु, पिटाइ खानु उनका लागि सामान्य भैसकेको छ । त्यसैको पछिल्लो श्रृङ्खला हो वस्तीमाथिको आक्रमण ।
एक महिना अघि कम्पनिबाट फर्कदै गर्दा उनलाई बाटोबाटै लुटेराले गाडिमा हालेर जङ्गल पु¥याए । उनको खल्तिमा भएको मोवाईल, एटिएम कार्ड र केही रकमसमेत जवर्जस्ती लुटे । त्यही घटनाको एक महिना पनि नपुग्दै अर्को आक्रमणमा परेका छन् वस्ती । बैंकवाट फर्कने क्रममा लुटेराहरु पिछा लागेको हेक्कै भएन उनलाई । लुटेराहरुले डेरामै आएर भयजति रकम लुटे । वस्तीलाई रित्तो बनाइयो । विचरा वस्ती !
वस्ती सम्झन्छन् ती क्षण – “दिन्न भन्दा पनि ग्याङ बोलाएर मार्छु भने । ज्यानभन्दा पैसा ठूलो थिएन । कम्पनीलाई खवर गर्ने कुरै थिएन ।”
केही क्षणको भनाभन र विवाद पश्चात उनीसँग भएका रकम सबै लुटेर भागे । कम्पनीलाई खवर गर्न दुई घण्टा अघि उद्धार हुदैन । प्रहरीमा उजुरी गर्न पन्ध्र हजार रुपैयाँ घुस माग्छन् । घर फर्कौं भनेपनि भिषा समय अबधि समय सकिएको छैन, भागेर जाउँ मलेसियाको जेलमा ६ महिना कोचिनु पर्छ ! वस्तीको गुनासो छ । विदेशस्थित नेपालीहरुको नियति यस्तै छ । जहाँ कुनै दिन लुटिने हुन् भन्नै सकिन्न ।
वस्ती लुट प्रकरण एउटा उदाहरण मात्र हुन् । त्यसैगरी, केही दिन अघिमात्र दुई नेपाली पनि लुटिए । रसुवाका भिम बहादुर मोक्तान र गोरखाका बिपिन बस्ताकोटीहरु लुटिनु विदेशिएकाहरुको विवशता यस्तै छ । जहाँ युवाहरुलाई ज्यान मार्ने धम्कि दिंदै मोवाइल देखि भएका रकमसमेत लुटेर फरार हुन्छन् मलेसियाली गुण्डाहरु । लुटको अर्को श्रृङ्खला छ, सबिन लोप्चनको ।
यी प्रतिनिधि घटना र पात्र मात्र हुन् । जुन मलेसियामा दिनानुदिन हुने गर्छ । त्यसमा परी अंगभङ्ग हुनु, ज्यान गुमाउनु या चोरी र डकैतीको शिकार बनिरहेका छन् नेपाली युवाहरु ।
काठमाडौमा रुपैयाँले सपनाहरु खरिद गर्न नसके पछि डलर नभए पनि रिङ्गेटका लागि मलेसिया जान आतुर हुन्छन् कतिपय युवाहरु । जसको अधिकांश सपनाहरु स्वदेशमै तुहिन्छन् श्वास्थ्य परीक्षण र भिसा प्रोसेसिङको वहानामा । नक्कली सम्झौतापत्र, अध्यागम कर्मचारी, प्रहरी, काम गर्ने कम्पनी र म्यान पावरका एजेन्टहरुको दुव्र्यवहार जस्ता अनेक व्यवधानहरु ती युवाहरुले स्वदेशमै पचाइसकेका हुन्छन् ।
आर्थिक, शारिरिक र मानसिक समस्याहरु झेल्दै विदेश पुगेकाहरुको पसिना वेचेर जोहो गरेका रकम पनि लुटिदिने क्रम बढ्दै गएका छन् । पीडा जति कहे पनि उस्तै ! जिम्मेवार को ?